एभाकाडो आन्द्राको लागि धेरै फाइदाजनक भएको एक अध्ययनको दाबी ! - krishipost.com
एभाकाडो आन्द्राको लागि धेरै फाइदाजनक भएको एक अध्ययनको दाबी !
धेरै प्रकारका पोषक तत्वहरू एभाकाडोमा फेला पर्दछन्। राम्रो स्किन र तौल नियन्त्रण गर्नका लागि एभाकाडो फाइदाजनक छ भन्ने त सबैलाई थाहा थियो तर तर एउटा नयाँ अध्ययनले एभाकाडो आन्द्राको लागि धेरै फाइदाजनक भएको दाबी गरेको छ ।
यो जानकारी अमेरिकी इलिनोइस कलेजको कृषि, उपभोक्ता र वातावरणीय विज्ञान विश्वविद्यालयको अध्ययनमा खुलासा भएको हो। अध्ययनले भन्छ कि हरेक दिन एभाकाडो खानाले स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ। एभाकाडो एक स्वस्थ खाना हो जुन फाइबर र मोन्युसेच्युरेट फ्याटमा धनी छ। यी दुबै चीजले आन्द्राको कीटाणुहरूलाई असर गर्दछ।
यो अध्ययन जर्नल अफ न्यूट्रिशनमा प्रकाशित भएको छ। उक्त अध्ययनका प्रमुख लेखक शेरोन थम्पसनले भने, ‘हामीलाई थाहा छ कि एभाकाडो पेट भर्छ, रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउँछ, तर यसले आन्द्राको सूक्ष्मजीवहरूलाई कसरी असर गर्छ भनेर हामीलाई थाहा थिएन।’अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि जो व्यक्तिहरू दिनहुँ एभाकाडो खाने गर्दछन् उनीहरूको आन्द्राको सूक्ष्मजीवहरूको संख्या बढी हुन्छ।
यी सूक्ष्मजीवहरूले मेटाबोलिज्म बढाउन फाइबरलाई राम्ररी काट्छन् जसले आन्दाहरूलाई स्वस्थ राख्छ। उक्त अध्ययनले पत्ता लगायो कि एभोकाडो नखानेहरूको तुलनामा एभोकाडो खानेहरुको शरीरमा थुप्रै प्रकारका सूक्ष्मजीवहरू पाइन्छन् जुन ब्याक्टेरियासँग लड्न मद्दत गर्दछन्।
थम्पसनले भने कि एभाकाडोको सेवनले पित्तको एसिड घटाउँछ र छोटो समयमा फ्याट्टी एसिड बढाउँदछ। यो अध्ययन ४५देखि २५ वर्ष बीचका स्वस्थ मानिसहरूमा गरिएको थियो। यी व्यक्तिहरूले बिहानको खाजा, खाजा वा डिनरमा कुनै पनि एक दिनमा हरेक दिन एभाकाडो खाएका थिए । यी समूहहरूमध्ये एकलाई केही दिन खानका लागि एभोकाडो पनि दिइयो जबकि अन्य समूहलाई एभाकाडोविना उस्तै आहार दिइयो।
अध्ययनमा सहभागीहरूले १२ हप्ताको अध्ययनमा उनीहरूको रगत, पिसाव र दिशाको नमूना दिए। उनले दिएको खानाबाट कति खाए भनेर पनि बताएका छन् । हरेक चार हप्तामा उनले यस बारेमा जानकारी दिए ।पहिले एभाकाडोमा सबै अनुसन्धान वेटलसमा आधारित थियो तर यस अध्ययनमा सहभागीहरूको आहारमा कुनै परिवर्तन गरिएका थिएन।
अन्वेषकहरूले शरीरमा क्यालोरीको मात्रा एभाकाडो नखानेहरूको तुलनामा थोरै मात्रामा पाए। यो अध्ययन पाचन प्रणालीको सूक्ष्मजीवहरूमा एभाकाडोको प्रभाव जान्ने उद्देश्यको साथ गरिएको थियो। उक्त अध्ययनका वरिष्ठ लेखक होल्सरले एभाकाडो खाने समूहको दिसामा पित्त एसिड कम र बढी चिल्लो पाइएको बताए ।
विभिन्न प्रकारका फ्याटको माइक्रोबायोमहरूमा फरक प्रभाव हुन्छ। एभाकाडोमा पाइने फ्याट मोनोस्याच्युरेटेड हुन्छ जसले मुटुलाई स्वस्थ राख्छ। अध्ययनका अनुसार मध्यम आकारको एभाकाडोमा करिब १२ ग्राम फाइबर हुन्छ ।